Pixel Mncedi imikhankaso yoluntu kunye namalungelo oluntu
Imikhankaso yoluntu kunye namalungelo oluntu
Iiprojekthi apho i-PixelHELPER isebenza ngayo ekuvululeni inxaxheba yoluntu kwizihloko ezidibeneyo. Udweliso lweendaba olufunekayo apha ukuze kufezekiswe uqhagamshelwano lweklasi kunye ne-intanethi, ukuhanjiswa kwegciwane lolo lwazi. Naluphina ulwabiwo lwamaphulo okunxibelelana kwezentlalo lunceda kwaye lukhuthazwa. Thetha kwinqanaba lethu labangani malunga namaphulo ethu kwaye uzame ukusixhasa.
Iphulo le "Demokhrasi engakumbi" eTurkey
Iposi ekhuniweyoOn 24. January 2021
Iposi ekhuniweyoOn 11. January 2021
Ilabhoratri enzulu yamalungelo oluntu
Iposi ekhuniweyoOn 5. January 2021
Ingxowa-mali yokuKhuselwa kwentando yesininzi yaseThai
Iposi ekhuniweyoOn 9. Epreli 2020
Isonka saseYurophu esenziwe ngeenkonkxa zoncedo olungxamisekileyo- uzinzo lokutya eAfrika
Iposi ekhuniweyoOn 19. January 2020
Inkampu ekusetyenzwa nzima kuyo Bou Boufa Isikhumbuzo sokuBulawa kwabantu eMorocco
Ukuzimela kumkhankaso weHongKong / Anti China
Iposi ekhuniweyoOn 17. January 2020
Silwela uRaif Badawi noJulian Assange!
Iposi ekhuniweyoOn 18. January 2019
Umsebenzi onyanzelweyo eBahlsen Oetker kunye naseK. KG
Iposi ekhuniweyoOn 19. Fe bruwari 2018
Unokufumana ngaphezulu kwemikhankaso yethu apha ...
Imikhankaso yoluntu kunye namalungelo oluntu NgoJanuwari 5th, 2021Oliver Bienkowski